GNU / Linux Desktop နေ့ရက်များ - သူတို့ကိုဂုဏ်ပြုရန် Wallpapers ဝက်ဘ်ဆိုက်များ Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, NOTICIAS
အမျိုးမျိုးသော၏အသည်းအသန်အသုံးပြုသူများစွာများထဲတွင် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များသို့မဟုတ် GNU / Linu Distrosx, ထုံးစံသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်ရှိပါတယ် ပိုကောင်းအောင်နှင့်ကိုယ်ပိုင် သူတို့ရဲ့ပြသနိုင်ဖို့, တတ်နိုင်သမျှအတူတူပင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလားအလာ ဒီ၏။
အထူးသ, နှင့်ပတ်သက် personalization ၏ GNU / Linux Distros ရည်ညွှန်းသည်များသောအားဖြင့်အုပ်စုများစွာ၌တည်ရှိ၏ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်အခမဲ့ကုဒ်အသင်းများ၏ရှုထောင့်ကိုအာရုံစိုက်ပါ စာရေးခုံ, အလေးပေး နောက်ခံပုံများ (နောက်ခံပုံများ) ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤစာမူ၌သင့်အားအသုံး ၀ င ်၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြချင်သည် နောက်ခံပုံများ ကျွန်တော်တို့အဲဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်လည်ပတ်နိုင်တယ်။
အကြောင်းအရာနှင့်အပြည့်အဝမ ၀ င်မီကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စာပေအချို့ကိုဖတ်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အကြံပြုပါသည် optimization နှင့်စိတ်ကြိုက် ငါတို့ထံမှ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များ:
2 နောက်ခံပုံ GNU / Linux Desktop နေ့များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
"Distro တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တိကျသော application များနှင့်လှည့်ကွက်များရှိပြီးအထိရောက်ဆုံးနှင့်ထိရောက်သောနည်းဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်တစ်ခုချင်းစီ၏ repositories တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤစာအုပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသုံးပြုသူများနှင့် GNU / Linux World တို့၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ Distros များ၏အကောင်းဆုံးရည်မှန်းချက်များကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်အလို့ငှာ Distros အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားမည်။".
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်«ဟုခေါ်တွင်ထုတ်ဝေရှိသည်ထည့်သွင်းပြီးနောက် MX-Linux 19.0 နှင့် DEBIAN 10.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ»၎င်းသည်သိရှိရန်နှင့်အသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာရှိသည်။
နောက်ခံပုံ GNU / Linux Desktop နေ့များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
အခမဲ့ HD နောက်ခံပုံများ: http://freehdw.com/
HD ကိုနောက်ခံများ: https://www.hdwallpapers.net/
HD နောက်ခံပုံများ: https://www.hdwallpapers.in/
Picky နောက်ခံများ: https://pickywallpapers.com/
လူမှု Wallpapering: https://www.socwall.com/
နောက်ခံပုံ Abyss: https://wall.alphacoders.com/
နောက်ခံပုံ Craft: https://wallpaperscraft.com/
Xtra Wallpapers: https://www.xtrafondos.com/
ArtStation - အနုပညာလက်ရာများ: https://www.artstation.com/search?q=wallpapers&sort_by=relevance
3D HD Desktop Wallpapers များ: http://www.bhmpics.com/3d-desktop-wallpapers.html
Concept အနုပညာကမ္ဘာ: http://conceptartworld.com/
DET :: ဂိမ်း၏အနုပညာ: http://deadendthrills.com/
HD Wallpapers Pexels− https://www.pexels.com/search/HD%20wallpaper/
Vladstudio နောက်ခံများ: https://vlad.studio/es/wallpapers/
DeviantArt ပေါ်နောက်ခံပုံများ: https://www.deviantart.com/search?q=Wallpaper
Unsplash Wallpapers များ: https://unsplash.com/t/wallpapers
ငါအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုသွားရောက်ပြီးနောက်, ထိုမျှော်လင့်ပါတယ် နောက်ခံက်ဘ်ဆိုက်များ, ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အများအပြားအောက်ပါအတွက်ဝတ်ဆင်ရန်လာမယ့်စံပြနောက်ခံပုံများရှာတွေ့ဖော်ပြခဲ့တယ် စားပွဲနေ့ သင့်အဖွဲ့ (သို့) ရပ်ကွက်။
နောက်ဆုံးတော့မင်းကိုငါထားခဲ့ပါတော့မယ် ထိပ်တန်းချက်ချင်းပုံရိပ်, ငါ့ကို၏မျက်နှာပြင် GNU / Linux desktop, ငါသည်သင်တို့ကိုငါသိ၏ဘယ်မှာ ကြယ်နောက်ခံပုံအဖြစ်လူသိများ image ကိုအသုံးပြုခြင်း "ဖန်ဆင်းခြင်းတိုင်များ"သောအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် NASA Hubble အာကာသတယ်လီစကုပ်။ ဤတိုင်များသည်သေးငယ်သောဒေသ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် လင်းယုန် Nebula၏ကျယ်ပြန့်ဒေသ 6.500 အလင်းနှစ်ပေါင်းကွာကြယ်ပွင့်ဖွဲ့စည်းရေး မြေကြီးကဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
ဒါဟာသတိပြုရကျိုးနပ်သည် GNU / Linux Distro ငါအသုံးပြုသည်အလွန်အစွမ်းထက်ခြင်းနှင့် optimization ဖြစ်ပါတယ် MX-Linux ကို ၁၉.၁ငါခေါ်သော အံ့ဖွယ် ၂.၀။ အရာ၏, မကြာမီငါသည်အခြားပို့စ်တွင်မှတ်ချက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများကြီးတန်ဖိုးထားအကြောင်းကို «Días de Escritorio»အထူးသဖြင့်အချို့သောအသုံးဝင်သောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြောင်း နောက်ခံပုံများ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်ပတ်နိုင်တယ်၊ အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » GNU / Linux Desktop နေ့များ - ဆင်နွှဲရန် Wallpapers ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
Mattermost 5.22 စာတိုပေးပို့စနစ်၏ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်